Xukuumada Trump oo 5 kun oo Soomaali ah Masaafurinaya – PuntlandNews24
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ku dhawaad 5 kun oo Soomaali ah laga masaafurin doono Maraykanka.
Brendan Raedy, afhayeenka ICE, waaxda fulinta arr. socdaalka iyo kastamka ayaa warbaahinta u sheegay laga soo bilaabo 1-dii bishan April, 2017 ilaa 4,801 oo Soomaali ah ay heleen amarkii u danbeeyay ee dalka looga soo saari lahaa.
Warkan ka soo baxay ICE ayaa xaqiijinaya macluumaad uu warbaahinta hore ugu sheegay safiirka Soomaaliya ee Maryakanka Axmed Ciise Awad oo isagu sheegay in safaaradda ay oggaatay in hay’addaha socdaalka Maraykanku ay qorsheynayaan inay masaafuriyaan ilaa 4 kun oo Soomaali ah oo imika ku nool Maraykanka.
Afhayeenka ICE ayaa sheegay in dadkan intooda badan ay danbiyo galeen, isla markaana ay ICE sii wadayso inay diirada saarto shaqsiyaadka halista ku ah amniga qaranka, badbaadada shacabka iyo waliba amniga xuduudaha.